‘हामी यौनबारे पाखण्डी छौँ, त्यही भएर विकृति बढिरहेको छ’ | Ratopati
सन्दर्भ : ओशोको जन्मजयन्ती
यौन जोडिएका घटनामा व्यक्ति हैन, प्रणाली दोषी छ : स्वामी आनन्द अरुणसँगको अन्तरवार्ता
personशम्भु दंगाल exploreकाठमाडौं access_timeमंसिर २५, २०७६ chat_bubble_outline0
ओशो रजनिशका चेलामध्ये एक ओशो सन्यासी स्वामी आनन्द अरुण ओशो तपोवनका संस्थापक हुन् । अहिले उनले देश विदेशमा गरेर १ सय ३ वटा शाखा विस्तार गरेका छन् । ओशोको दर्शनमा आधारित योग, ध्यान जस्ता आध्यामिक कार्यक्रमहरुलाई विश्वाव्यापी गरिरहेकास्वामी आनन्द अरुणसँग धर्म, अध्यात्म लगायत समसामयिक विषयमा रातोपाटी संवाददाताशम्भु दंगालले गरेको कुराकानी :
भौतिकवादमा लागेर जब मान्छे दुःखी हुन्छ, सन्तुष्ट हुँदैन, जो मान्छे अलि संवेदनशील छ, अधिकांश मान्छे त भौतिकवादमै अल्झिरहेको हुन्छ, उसलाई थाहै हुन्न कि भौतिकवादको सीमा के हो । मैले भन्ने गरेको छु अधिकांश व्यक्ति ‘ब्रेड एन्ड सेक्स’ र आफ्नो प्रसिद्धि यही तीन चिजमा अल्झिएका हुन्छन् । अधिकांश व्यक्ति त खान लगाउन घर बनाउन र सम्भोग गर्न यतिमै उसको जीवन दौड हुन्छ ।
सबैभन्दा पहिले हामीले भौतिक विकास नगरी त्यो आध्यात्मिक हुँदैन । धार्मिकतामा कहीँ न कहीँ लोभ लुकिराखेको हुन्छ । जो मान्छेले राम्रो लुगा लगाउन पाएको छैन, राम्रो खान पाएको छैन उसले कसरी बुद्धका वचन बुझ्छ ? कसरी उपनिषद् बुझ्छ ? बुझ्दै बुभ्mदैन नि । उसको मन त खान लाउनमै घुमिराख्या हुन्छ ।
जब म ओशोमा लागेँ त्यतिबेला इन्डियामा जनसङ्ख्या करिब करिब ४५ करोड थियो र संसारको जनसङ्ख्या साढे तीन अरब थियो । त्यो बेलादेखि ओशो कराउनुभयो कि अनिवार्य रूपमा परिवार नियोजन गर । यदि यसो नगर्ने हो भने यो शताब्दीको अन्त्यसम्म हामी डबल हुन्छौँ । डबल भएपछि खाना त छोडौँ । पानी पनि पाउँदैन । ओशोले यो ६० वर्षअघिबाट कराइराख्नु भएको छ । आज ओशोको सान्दर्भिकता एकदमै बढी छ । जति ढिला गर्छौँ हामी ओशोलाई बुझ्नलाई त्यति नै मानव सङ्कट बढ्दै जान्छ ।
अहिलेको जुन मानव विकास छ । जसरी हामीलाई समाजले पाखण्डी बनाइराखेको छ । यो पाखण्डी समाज हो यहाँ खाने दाँत र देखाउने दुईवटा दाँत छन् । सबैलाई आफू शिष्ट, सेक्सको मामिलामा पवित्र भएको देखाउनुपर्ने छ । भित्र चाहिँ उसको व्यवहार अर्कै हुन्छ । यो झुटा व्यक्तित्व जुन हाम्रो समाजले खडा गरेको छ यसैले सबै भइरहेको छ । ओशो सेक्सलाई प्राकृतिक रुपमा स्वीकार गर भन्नुहुन्छ । यो किन उपद्रो छ ? सारा मानसिक रोगहरु अहिले छन् ? त्यसको कारक नै सेक्स हो ।
यही फरक छ हाम्रो संन्यासमा । हाम्रो संन्यास रचनात्मक सन्यास हो । यो पलायनवादी हैन, सिर्जनवादी संन्यास हो ।
अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको टिप्पणी : परीक्षा नै नदिई जागिर खाने ‘माननीय’ कसरी ‘उच्च नैतिकवान्’ ?
धर्मको विषय असान्दर्भिक बहस हो : विमलेन्द्र निधि
एमालेको चेतावनी : प्रतिपक्षविनै सदन चलाएर देखाए हुन्छ !
महरालाई प्रश्न : एमसीसी के हुन्छ ? सरकार विस्तार कहिले ? वाम एकता सम्भव छ ?
महिलाले अर्डर गरिन् चिकेन बर्गर, पहिलो गाँसमै भेटिन् मान्छेको औंला
बेलायतले ‘रेडलिस्ट’ मा व्यापक परिवर्तन गर्दै, सूचीबाट हट्ला त नेपाल ?
आन्तरिक प्रशिक्षणमा सीके राउतले सुनाए मधेस कब्जाको रणनीति